html code နားမလည်ဘဲ Blog template တစ်ခုချင်းစီကို မိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနည်း ~ ITmanHOME
07:15 blog, နည်းပညာ No comments
html code နားမလည်ဘဲ Blog template တစ်ခုချင်းစီကို မိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနည်း
ကျွန်တော်ဒီနေ့ အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ ဘလောက် template ကိုပြောင်းပုံပြောင်းနည်း လေးပြောပြပါ့မယ်.. ဒီနည်းလေးကို ကျွန်တော်ရေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတော့ သူငယ်ချင်းတော်တော်များများဟာ ကို့ရဲ့ ဘလောက်လေးကို သူများဘလောက်တွေလို အရမ်းလှချင်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် html အကြောင်း သိပ်ပြီးနားမလည်ကြတာကြောင့် သူများရေးထားပြီးသား blog template များကိုပဲ သုံးကြရတာကို ကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရတာကြောင့်မို့လို့. အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလေးနဲ့ ဘလောက် template ပြောင်းနည်းကို တင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလေးဟာ အရမ်းကိုလွယ်တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုလိုချင်တဲ့ ဘလောက်ပုံစံလေးကို စိတ်ကူးထဲကအတိုင်း ပုံဖော်ပြီး ပြန်ပြင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တာကြောင့် ဖတ်သူ သူငယ်ချင်းများကြေနပ်အားရ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘလောက်လေးကိုလည်း အဲ့ဒီံနည်းလေးနဲ့ပဲ လုပ်ထားတာပါ။ ဘယ် blogger များမှ ဒီ template ပြောင်းနည်းလေးကို မရေးပေးသေးလို့ တင်လိုက်တာပါ။ သိပြီးသားဆိုရင်တော့ ကြိုပြီးတောင်းပန်ထားပါရစေ မသိသေးတဲ့သူများအတွက် ရည်စူးထား ပါကြောင်း၊ နှာခေါင်းမရှုံကြရန်ကိုပါ ထပ်လောင်းပြီးတော့ပြာထားပါရစေ။ ကဲပြောင်းနည်းလေးကို စလိုက်ကြရအောင်လားဗျာ.အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ စိတ်ကူးထဲကအတိုင်း ပြုပြင်ဖို့ အဆင်သင့်လုပ် ထားပြီးသား ဘလောက်ပုံစံလေးတွေကို လိုက်ရွေးပါ့မယ်။ အကောင်းဆုံး free ရမယ့် ဘလောက်လိပ်စာများကိုလဲ တစ်လက်စတည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး adobe photoshop ကိုတော့ စာဖတ်သူရဲ့ PC မှာကြိုပြီးတော့ တင်ထားဖို့လိုပါတယ်...
မိမိလိုချင်တဲ့ template ပုံစံမျိုးကို အရင်ဦးဆုံး download လုပ်ပြီး တင်ထားလိုက်ပါ ... လိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးဆိုတာက
(ဥပမာ - side bar နှစ်ခု ဘယ်တစ်ခုညာတစ်ခု (သို့) header အနေအထား ကောင်းမကောင်း စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ .. နောက်ခံတွေ လှသည်ဖြစ်စေ
မလှသည်ဖြစ်စေ အရေးမကြီးပါဘူး .. အဓိကကတော့ သူပေးထားတဲ့ ပုံစံလေး
ကို ကြိုက်မကြိုက်ရွေးပြီး၊ ကြိုက်တာနဲ့ မိမိဖာသာ မိမိ ပြန်လည်ပြုပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံစံကိုပဲ ရွေးပါ ... နောက်ခံက ကိုလိုချင်တဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်
ကျန်တာကို တစ်ခုချင်းစီ ပြုပြင်သွားပေးပါ့မယ် ... အားလုံးကတော့ ဒီနည်းအတိုင်း ပြုပြင်သွားလိုက်ပါ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ဘလောက်လေးတစ်ခု
ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် .. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ ပြန်ပြီး စိတ်ကြိုက်မပြင်နိုင်သေးဘူး .. အလုပ်တွေနဲ့ချည်းပဲ လုံးချာပတ်ချာလည်လိုက်နေတာနဲ့လေ ..
ကဲ ပထမဦးဆုံး ဘလောက်ဂ်တစ်ခုရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အလှအပနေရာမှာပါတဲ့ Header ကို အရင်ဦးဆုံး ပြင်လိုက်ကြည့်ရအောင်ဗျာ ...
ကဲ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နဲ့ ရေလိုင်းပုံစံမျိုးလေးလုပ်တဲ့ software လေးကို ကိုသံလုံငယ်ဆီကနေ ရလာတာပါ ....
လင့်က ဒီမှာ ပါ ...
တင်ပုံတင်နည်းကတော့ ကျွန်တော် ပုံတွေနဲ့ ရှင်းလင်းပြထားပါ့မယ် .. တင်စရာတွေတော့ အများကြီးရှိပါတယ် ...
ပထမဦးစွာ မိမိရေးထားပြီးသား blog template တစ်ခုကို တင်လိုက်ပါ ... တင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ တင်ထားပြီးသားပုံကို ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ ..
ကိုမကြိုက်တဲ့ နေရာတွေကို တစ်နေရာချင်းစီလိုက်မှတ်ထားပါ .. ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ .. ဥပမာ - header လေးကို ပြန်ပြင်ချင်
တာလား .. ဒါမှမဟုတ်ရင် Menu Bar ကိုလား .. ဒါမှမဟုတ်၊ Background ပုံစံကိုပြောင်းမှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် Side Bar ပုံစံလေးကိုလား ..
အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ .. ကိုပြောင်းချင်တာတွေကို အရင်ဦးဆုံး ကြည့်လိုက်ပါ ..ပြီးရင် ပုံမှာပြထားသလို ဆက်သွားလိုက်ကြရအောင် ...
ကျွန်တော် အရင်ဦးဆုံး header ပြောင်းပုံပြောင်းနည်းလေးကို လုပ်ပြပါ့မယ် .. နောက်ရက်အားတာနဲ့ တစ်ခြားကဏ္ဍတွေကိုပါ
ဆက်လက်ပြီး ပို့စ်တင်သွားပေးပါ့မယ် .. တစ်ခုကို နားလည်သွားရင်တော့
နောက်တစ်ခု လုပ်ရဖို့ လွယ်ကူသွားပါပြီ ....
အခုပထမဦးဆုံး ကျွန်တော် template တစ်ခုကို ယူပြီး တင်လိုက်ပြီပေါ့ဗျာ .. အခုမြင်နေရဲ့ template လေးမှာ header ပိုင်းလေးကို မကြိုက်ဖူးဗျာ .. အဲ့တော့ change ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ..
(၁) ပုံမိမိ Blog လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ ..
မိမိလိုချင်တဲ့(ပြောင်းချင်တဲ့) header အဟောင်းမူရင်းပုံစံလေးကို right click နှိပ်လိုက်ပါ ... save background as ကို နှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပါအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ..
ပေါ်လာတဲ့အထဲမှာမှ အခုမြင်နေရတဲ့ မှင်နီနဲ့တားပြထားတဲ့ နေရာက file name ကို copy ကူးလိုက်ပါ ....
ကဲ ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဖြင့် layout >> edit html ကို သွားလိုက်ပါ .
ပြီးရင်တော့ ပေါ်လာတဲ့ (ctrl + f) ကို တွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပါ အောက်ပါအတိုင်း find ဆိုတဲ့ အကွက်လေးပေါ်လာပါ့မယ် ..
ပေါ်လာတဲ့အကွက်လေးထဲမှာ ယခင်က ကူးထားတဲ့ (file name) ကို အစားသွင်းပြီး Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ..
အောက်ပါပုံလေးအတိုင်း ကော်ပီကူးထားတဲ့ စာသားများကို တွေ့မြင်ရမှာပါ ... ၄င်းစာသားများထဲမှ ' http://...../ တစ်ခုခုပေါ့ အဲ့လို http:// နှင့် စာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကို ကော်ပီကူးလိုက်ပါ .. ' ကူးရန် ' အဖွင့်နှင့်အပိတ်ကော်လံနှစ်ခုကြားထဲက http:// ကိုသာ ကူးရမှာပါ .. ကော်လံနှစ်ခု မပါစေရပါဘူး ...
ပြီုးရင်တော့ ကော်ပီကူးထားတဲ့ လိပ်စာလေးကို အောက်ပါအတိုင်း address bar မှာရိုက်ကြည့်လိုက် ကိုပြောင်းချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံအဟောင်း header ပုံစံလေးကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ...
header ဆိုတာ သေချာအောင်လို့ပြန်ကြည့်တာပါ .. သေချာပြီဆိုရင်တော့ အဲ့ကောင်ကို save as နဲ့ တစ်နေရာရာမှာ သိမ်းပြီ adobe photoshop နဲ့ဖွင့်ပါ့မယ် ...
ကဲပွင့်ပြီဆိုရင်တော့ မှင်နီနဲ့ပြထားတဲ့ rectangular marquee tool နှိပ်ပြီး Ctrl + A ( select all) နှိပ်လိုက်ပါ ပြီးလျှင် ctrl + c (copy) ပါ ... ပြီးရင်တော့ ctrl +n (new) ကို သွားလိုက်ပါ ပေါ်လာတဲ့အကွက်ကို ဘာတစ်ခုမှ မပြင်ပဲနှင့် enter ကို နှိပ်လိုက်ပါ .. layer အသစ်တစ်ခု (ဗလာချည်းသက်သက်) ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် . အဲ့ဒီ့အကွက်ဟာ ဟိုးအရင် ပုံစံအဟောင်း Header နှင့် ဆိုက်အတူတူပါပဲ .. အဲ့ဒီ့တော့ ယခုပေါ်လာတဲ့ layer အသစ်လေးထဲမှာ ကိုလိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုးနှင့် ဒီဇိုင်းတွေကို လုပ်လိုက်ပါ ... ကျွန်တော်ကတော့ မနေ့ကလေးတင်ပဲ လုပ်ထားလိုက်တယ် ..
ပုံစံကတော့ မိုက်ဖူးပေါ့ဗျာ .. ဒါပေမယ့် စမ်းပြီးတော့ ပြောင်းပြတာဆိုတော့ နမူနာပေါ့ .. သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကိုလိုချင်တဲ့ ပုံစံမျိုး အမျိုးမျိုးလုပ်ကြပေါ့ဗျာ .. ဟုတ်ဖူးလား ..
အခုလိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ ဖြင့် အဲ့ဒီ့ ပုံလေးကို .Gif နှင့်သိမ်းလိုက်ပါ ... .jpeg နှင့်မသိမ်းဖို့တော့ အထပ်ထပ်သတိပေးလိုက်ပါတယ် .. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် .jpeg နှင့် ကပုံတွေ ပေါ်တော့ပေါ်တယ် ကိုပြင်ထားတာက ပုံကလှလှလေး ၀ဘ်ဆိုက်မှာပေါ်မှာက ပေတိပေစုပ်နဲ့ ၀ါးနေလိမ့်မယ် .. .gif နှင့်သိမ်းပြီး တစ်နေရာရာမှ သိမ်းထားလိုက်ပါ ..
ရလာတဲ့ဖိုင်လေးကို ကိုကြိုက်တဲ့ hosting ဆိုက်တစ်ခုခုမှာတင်လိုက်ပါ တင်ပြီးရင် ရလာတဲ့ direct link လေးကို ကော်ပီကူးပြီး html အကွက်ထဲက (ပုံ-၅) ထဲက http:// နှင့်စတဲ့ လိပ်စာကို delete ပေးပြီး ယခုတင်လိုက်တဲ့ direct link လိပ်စာကို အစားသွင်းလိုက်ပါ ပြီးရင်တော့ save template ကို နှိပ်လိုက်ပါ .. အိုကေသွားပါလိမ့်မယ် ...
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ အဲ့ဒီ့ direct link လေးကိုပဲ အောက်မှာရှိနေတဲ့ Layout >> page element >> (Head) ရဲ့နဘေးက Edit ဆိုတာကို နှိပ်လိုက် direct link လေးကို web အကွက်လေးထဲမှာ ထည့်လိုက်ပါ.. အောက်ပါပုံလေးအတိုင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ save လိုက်ပါတော့ ..
အခုရေးတာက လတ်တလော header လေးကို ပြင်နည်းလေးပါ .. ဒီပို့စ်ရေးနေတာ မပြီးသေးပါဘူး .. လိုအပ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ပိုပြီးရှင်းသွားအောင် ပြင်ဆင်ပါဦးမယ် .. အခုအနေအထားနဲ့လဲ photoshop နားလည်ပြီး template ပြောင်းတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ လုပ်တတ်မှာပါ .. ကျွန်တော်အဓိကရည်စူးထားတာက အခုမှ စပြီးလေ့လာတဲ့ ဘလောက်ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများ အတွက်ရည်စူးပြီး ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော့်ပို့စ်လေးကို ကျွန်တော် ပြန်ဖတ်ပြီး မကြေနပ်သေးရင် အသေးစိတ်ပြန်ရေးပြီး ပြန်ပြင်ပေးပါဦးမယ် .. ကျွန်တော် body အပိုင်းနဲ့ တစ်ခြားအပြင်အဆင်တွေအကြောင်းကို ရေးသားပါဦးမယ် ... ဘာမှမပူပါနဲ့ ရှိသမျှဘလောက်လေးကို စိတ်ရှိတိုင်း ဗျောင်းဆန်အောင် ပြင်ဆင်လို့ရအောင်အထိကို ပို့စ်တင်ပါဦးမယ် ...
အဲတစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ .. photoshop ကိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ တင်ထားဖို့လိုပါတယ် .... ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်ကြိုက်မွှေလို့ရပါပြီ ...